यी हुन मर्नुभन्दा पहिले नछुटाई हेर्नु पर्ने रोमान्टिक १० फिल्महरु - पलपलका खबर
यी हुन मर्नुभन्दा पहिले नछुटाई हेर्नु पर्ने रोमान्टिक १० फिल्महरु
December 6, 2018 December 6, 2018 - by Palpalka Khabar - LeaveaComment
१. टाइटनिक सन् १९९७
फरक वर्गका केटाकेटीको सदाबहार प्रेमकथा हो यो । जेम्स क्यामरुन निर्देशित यस फिल्ममा लियोनार्डो डिकाप्रियोलाई गरिब आर्टिस्ट र केट विन्स्लेटलाई सम्पन्न केटीको भूमिकामा देख्न पाइन्छ ।
टाइटनिक पानीजहाजको सत्य दुर्घटनाको फिक्सनल लभ स्टोरी भएकाले पनि यो फिल्म निकै चर्चित भयो । सन् १९९७ मा यसले ११ विधामा ओस्कार अवार्ड जितेको थियो । रोमान्टिक फिल्म हेर्न चाहनेका लागि ‘क्याप्सुल’ समान छ टाइटनिक ।
२. अ वाल्क टु रिमेम्बर सन् २००२
यो युवा पुस्तामा एकदमै लोकप्रिय फिल्ममध्ये एक हो । मोडर्न सोसाइटीमा बिग्रिएको केटा प्रेममा परेपछि आउने परिवर्तनको कथा भन्छ यसले । शेन वेस्ट र म्यान्डी मुरेको चरित्र झट्टै आत्मसात् गर्न सकिन्छ । एडम स्याकमन निर्देशित यस फिल्मले जीवनमा प्रेमको महत्त्व दर्शाउँदै प्रेमप्रति सकारात्मक भाव पैदा गर्छ ।
३.द नोटबुक सन् २००४
अर्को कालजयी लभस्टोरी हो यो । अल्जाइमर भएकी बूढी श्रीमतीलाई बूढाले उनीहरूकै प्रेमकथा नोटबुकबाट पढेर सुनाउँछन् । केटा गरिब र केटी धनी भएकाले मायालाई टिकाउन उनीहरूले कठोर त्याग गरेका हुन्छन् । निक क्यासभेटले निर्देशन गरेको यो फिल्मले मायामा प्रतिबद्धता डिमान्ड गर्छ । ‘फास्टफुड लभ’ को जमानामा आइपुगेको आजको पुस्ताले हेर्नैपर्ने फिल्म हो यो ।
४ . फाइभ हन्ड्रेड डेज अफ समर सन् २००९
एउटी केटी छे, जसलाई प्रेममा फिटिक्कै विश्वास छैन । त्यही केटीको प्रेममा परेको केटाको कथा हो यो । जोडी आफंैले रोज्ने हो कि भावीले लेखेको हुन्छ ? निर्देशक मार्क वेबले फिल्ममा यही प्रश्नलाई डिल गरेका छन् । यसको कथा निकै रमाइलो शैलीमा भनिएकाले पनि जो कोहीको मन जित्छ । अझ प्रेमप्रति वितृष्णा जाग्नेले त हेर्नैपर्ने फिल्म हो यो ।
५ . बिस्ट्ली सन् २०११
मिथमाथि आधारित यस फिल्ममा एउटा केटालाई ‘तैंले एक वर्षभित्र माया गर्ने मान्छे भेटाइनस् भने बर्बाद हुन्छ’ भन्ने सराप दिन्छ । अनि कलेज पढ्ने केटा त्यही मायाको खोजीमा लाग्छ । निर्देशक डानियल बान्जले एउटा मान्छेको जीवन पूर्णताका लागि प्रेम कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउने प्रयास गरेका छन् । प्रेम गर्ने जो कोहीका लागि प्रिय हुन सक्छ यो फिल्म ।
६ . रिमेम्बर मी सन् २०१०
प्रेमले आत्मविश्वासी र बलियो त बनाउँछ नै । तर सम्हाल्न जानिएन भने त्यही सशक्त पक्ष कमजोरी हुन पनि समय लाग्दैन । यही यथार्थलाई पर्दामा बुनेका छन् निर्देशक एलेन कुल्टरले । मुख्य पात्रद्वय रोबर्ट प्याटिसन र इमिल डे रेभिन पारिवारिक वियोगबाट गुज्रिएका हुन्छन् । प्रेमलाई दिगो र बलियो बनाउन खोज्नेका लागि रिमेम्बर मीले मन जित्न सक्छ ।
७ .ब्लु भ्यालेन्टाइन सन् २०१०
योचाहिँ विवाहित जोडीको प्रेमकथा हो । त्यो पनि श्रमिक वर्गको । केटा पेन्टर हुन्छ, केटी नर्स । तर प्रेमको शक्तिले केटाभित्रको क्षमता पहिल्याउन सफल हुन्छिन् युवती । जीवन सुखमय बन्छ । विवाहित जोडीले आफ्नो प्रेमलाई बचाउन गर्नुपर्ने त्यागको वरिपरि घुमेको यस फिल्मलाई डेरेक सियानफ्रेन्सले निर्देशन गरेका हुन् । यो हेर्दा मन आनन्दित हुन्छ ।
८ . माई स्यास्सी गर्ल सन् २००८
संयोगले भेटेको जोडीको प्रेमले स्थायित्व पाउला त ? त्यसमाथि केटा लद्दु टाइपको हुन्छ, केटी स्मार्ट । निर्देशक यान सामुयलले बाहिरबाट हेर्दा यस्तै नसुहाउने केटाकेटीले पनि एकअर्कालाई बुझ्ने समय दिएमा प्रेम जागृत हुन्छ भन्ने देखाउन खोजेका छन् । साथै हिजो भाग्यमा जे लेखेको थियो, त्यो पूरा भइहाल्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यही फिल्मबाट ‘इन्स्पायर्ड’ भएर आलोक नेम्वाङले सानो संसार बनाएका थिए ।
९ . हाउ टु लुज अ गाय इन टेन डेज सन् २००३
यो कमिक लभ स्टोरी हो । जहाँ दस दिनमा कसैलाई पाउने र घुमाउने कथा भनिएको छ । बाजी राखेको भरमा केटी पट्याउन खोज्छ मूल पात्रले । आजको पुस्ताको प्रेममा भावनाभन्दा लहडको भूमिका अहम् हुन्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । आधुनिक प्रेममाथिको निर्देशक डोनाल्ड पेट्रीको थोरबहुत व्यंग्यका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ यो फिल्म ।
१०. लिप एयर सन् २०१०
आइरिस परम्पराअनुसार ‘लिप डे’ मा कुनै केटीले प्रस्ताव राख्यो भने केटाले हमेसा स्वीकार गर्छ/गर्नुपर्छ । सोही कारण फिल्मकी मुख्य पात्र अन्ना ब्राडी आफ्नो
प्रेमी जेरेमीलाई पर्पोज गर्न बोस्टनबाट डब्लिन यात्रा गर्छिन् । तर यात्राका क्रममा विभिन्न अवरोध आउँछ । तैपनि हार मान्ने त कुरै भएन । निर्देशक आनन्द टुकरले मायालाई उत्सवका रूपमा मनाउन एउटा केटीले लिएको चुनौतीलाई निकै रमाइलो शैलीमा पर्दामा बुनेका छन् । nepali news
Previous Article भद्रगोलका जिग्री भन्छन ‘भाउजू पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेको हेर्ने धोको छ’
Next Article यी प्रहरी जवानले गरे यति ठुलो काम जसबाट खुशी भई गाउँले गरे यसरी सम्मान… (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)